"စည်းကမ်းများကျိုးပါစေဖို့ရည်ရွယ်နေကြပါတယ်။ " အကြင်သူသည်ဒီအသုံးအနှုန်းယူဆောင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်နိုင်သောပြစ်ဒဏ်စဉ်းစားခြင်းမရှိပါ။ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာတာဝန် - အားလုံးဥပဒေရေးရာတာဝန်ယူမှု၏ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေကိုချိုးဖောက်ထားတဲ့သင့်လျော်သောပြစ်ဒဏ်ပါဝငျ။
ပညတ္တိကျမ်းကဲ့သို့တူညီသောလက္ခဏာများနှင့်အတူ, ဒါပေမယ့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာတာဝန်ယူမှုနှင့်မတူဘဲအုပ်ချုပ်ရေးဒဏ်ခတ်အရေးယူမှု၏ညှဉ်းဆဲခြင်းကိုနှင့်ပြင်းထန်မှုအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာမပေးပါ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အဘယ်သူမျှမဥပဒေရေးရာအကျိုးဆက်များနှင့်ရာဇဝတ်မှုမှတ်တမ်းများရှိပါတယ်အဖြစ်။ ဒါဟာအမိန့်မှဆောင်ခဲ့တစ်ဦးထက်ပိုနူးညံ့သိမ်မွေ့သဘာဝအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။
အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ယူမှု၏အဓိကအတိုင်းအတာတစ်ခုအုပ်ချုပ်ရေးပြစ်ဒဏ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့သောပြစ်ဒဏ်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူဆပ်ဖို့မလိုအပ်သောပြစ်ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများ, ပြုရန်တွန်းအားပေးခြင်းဖြင့်ထွက်ယူသွားတတ်၏။ ချမှတ်ထားသည့်ဒဏ်ငွေ၏အရွယ်အစားထက်မပိုရကြလိမ့်မည်:
25 ဆအနည်းဆုံးလုပ်ခ (နိမ့်ဆုံးလုပ်အားခ) နိုင်ငံသားများသည် ဖြစ်. ,
တာဝန်ရှိသူများအဘို့ 50 ကြိမ်နိမ့်ဆုံးလုပ်အားခ;
လူတွေကိုပိုပြီးဥပဒေကိုလိုက်နာခြင်းနှင့်ပြစ်ဒဏ် toughen ဖို့လုံလောက်တဲ့တာဝန်ရှိဖြစ်လာဘို့အလို့ငှာ။ အဆိုပါပြည်နယ်, လျောက်ပတ်သောလူနေမှုအခြေအနေများပေးဥပဒေရေးရာယဉ်ကျေးမှု၏အဆင့်ကိုတိုးမြှင့်ဖို့,, သင်တန်း, အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများကိုဖျက်ပယ်ရန်လိုအပ်သည်။ ကံမကောင်းမဖြစ်နိုင်အဆုံးစွန်သော။ ပါဝါ၌နေသောသူများသည်၎င်းတို့၏တိုင်းပြည်နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့စံနမူနာသငျ့သညျ။ သူတို့ဟာလူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံးဖြစ်ကြောင်း, အားလုံးအခွင့်အရေးနှင့်ဥပဒေများရှုလေ့လာရမည်ဖြစ်သည်။
အာဟာရ - သောသူသည်သူဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကို?
မိန်းမတို့အဘို့ပင်မစာမျက်နှာ based စီးပွားရေးလုပ်ငန်း
ခြစ်ရာကနေ pastry ဆိုင်ဖွင့်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Kurtka Thor Steinar
Kendall Jenner သူမ၏စုံလင်သောကိန်းဂဏန်း၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုထုတ်ဖော်ပြသ
မြေပြင်တွင်မှ - ခေတ်သစ်ချော plinth, mounting features တွေ
Follicles-လှုံ့ဆော်ဟော်မုန်း - မိန်းမတို့အဘို့စနစ်တစ်ခု
ကြောင်အတွက် distemper လက္ခဏာ
ရှေ့ဆက် Bitcoin Kardashian, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်နေဆဲသူတို့ကိုမယုံကြည်ကြဘူး: cryptocurrency ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်မဟုတ်6အကြောင်းရင်းများ
အထီးမျိုးမပွားနိုင်ခြင်း - ဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းရင်းများနှင့်အကောင်းဆုံးကုသမှု
Brooke Shields ဇီဝ
သားသမီးရဲ့အိပ်ခန်း - ပရိဘောဂ